Handball – “CCCOI 2016” : tafakatra amin’ny manasa-dalana ny AS Tsiky | NewsMada
Handball – “CCCOI 2016” : tafakatra amin’ny manasa-dalana ny AS Tsiky
Par Taratra sur 23/11/2016
Nitohy, omaly teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI), taranja handball. Tafakatra eo amin’ny ankatoky ny famaranana ny AS Tsiky Boeny, eo amin’ny vehivavy, vondrona “B”.
Nahazo fandresena fanindroany mantsy ity ekipa malagasy ity, rehefa nandresy ny Boueny avy any Mayotte, tamin’ny isa tery 25 noho 23. Niady ny lalaon’ny roa tonta ary efa tany amin’ny fotoana farany vao tafavoaka ho mpandresy ny AS Tsiky, notarihin-dry Blandine sy ry Lalaina ary i Elia.
Tafita amin’ny manasa-dalana ihany koa ny JSB La Réunion, rehefa nandavo ny Storm Seychelles, tamin’ny isa mazava 23 noho 9, tao anatin’io vondrona io ihany. Ho an’ny vondrona “A”, mbola resy fanindroany indray ny Company avy any Mayotte, rehefa niondrika teo anatrehan’ny Port avy any Maorisy, tamin’ny isa 18 noho 16. Hiady ny lohany amin’ny THBC ny Port, amin’ity anio ity, izay efa samy tafita amin’ny manasa-dalana.
Teo amin’ny lehilahy, resin’ny Tampon, tamin’ny isa 22 noho 18, ny Tsingouni. Tamin’ny isa mazava, 29 noho 20 kosa, ny nandresen’ny Curepipe ny Brothers Seychelles ary isa tery 19 noho 18 ny nandavoan’ny Tsimkoura Mayotte ny St Gilles La Réunion.
Hitohy anio ny fifanintsanana, eo amin’ity CCCOI ity.